Home » News na ụgbọ elu » Ndị nwe Canada na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri jikọtara ọdịiche dị n'etiti ọdịnala na nke ụgbọelu dị anya
'Slọ ọrụ ụgbọelu kachasị ukwuu na Canada na-ewebata nhọrọ ndị otu.
COPA na-ewebata nhọrọ ndị otu ọhụrụ iji gụnye obodo na-eto eto
Drones na-agbanwe ụwa nke ụgbọ elu nke ukwuu, yana ka teknụzụ ọhụrụ a na-agbanwe, otu ahụ ka ọrụ ya na ọha mmadụ ga-adị
Aircraftgbọ elu a na-agagharị agagharị na-agbanwe azụmaahịa ndị Canada
The Ndị Canada na ndị ọkwọ ụgbọelu (COPA) - ndi otu ugbo elu nke kachasi elu na Canada - na ewebata uzo ndi ohuru iji tinye obodo ndi na-eto eto.
Drones na-agbanwe ụwa nke ụgbọ elu nke ukwuu, yana ka teknụzụ ọhụrụ a na-agbanwe, otu ahụ ka ọrụ ya na ọha mmadụ ga-adị. Aircraftgbọ elu a na-anya nke ọma na-agbanwe azụmaahịa ndị Canada, na-enyere nghọta na ike ọhụụ na njikwa ọdachi, nyocha na nnapụta, akụrụngwa, na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ.
Dị ka onye ndu a tụkwasịrị obi na ịkwalite na ịkwalite nchekwa ụgbọelu, yana olu amara ogologo oge maka General Aviation na Canada, COPA nọ n'ọnọdụ pụrụ iche iji nọchite anya ndị na-anya ụgbọelu ọdịnala na ndị dịpụrụ adịpụ. Ebumnuche bụ isi n'ịjikọ obodo ndị a ọnụ bụ ịkwado mbọ COPA na-aga n'ihu maka ijikọ ndị ọrụ ikuku niile. Ndị ọkwọ ụgbọ elu ọdịnala na ndị dịpụrụ adịpụ na-ekerịta ọdịmma na nchekwa na ichebe nnwere onwe ha ife.
COPA etinyela aka na drones na ihe metụtara ya ọtụtụ afọ. Mkpakọrịta ahụ enyerela aka na mmepe nke ngwa ọrụ RPAS a ma ama, gụnyere National Research Council nke Canada maka nhọrọ nhọrọ saịtị wee soro ndị na-ahụ maka ụgbọelu na Canada rụkọọ ọrụ iji kwado atụmatụ mmụta agụmakwụkwọ.
N'ịghọta mkpa ọ dị ijikọ sistemụ ụgbọelu a na-ahụ anya (RPAS) n'ime ọdụ ụgbọ elu Canada, COPA na-elekwasị anya na mpaghara ndị a: Ọzụzụ na asambodo RPAS; RPAS Okporo ụzọ Management (RTM); Gafere Nrụ Ọrụ Anya (BVLOS); Uwe ikuku RPAS; chọpụta ma zere; chọọ na nnapụta; na ntoputa nke uzo ozo nke RPAS.
Christine Gervais, onye isi oche na onye isi oche nke COPA kwuru, "Dịka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri RPAS na-aga n'ihu na-arụ ebe ha na-arụ ụgbọelu, COPA ga-akwado site n'inye akụrụngwa na obodo ndị ọ bụla chọrọ ịbawanye ahụmịhe ụgbọ elu ha. "Nke a bụ oge dị mma iji nabata ihe ọhụụ n'ime ụgbọelu, ọkachasị ka ọtụtụ ndị nọ na ụgbọelu ọdịnala emetụta COVID-19."
“Comingnabata ndị obodo drone ga-ewusi ngalaba ụgbọelu ike. Ma ka egwu ndị ọrụ ikuku ọhụụ a dị, enwere uru karịa ịchọta ebumnuche dị n'etiti ọdịnala na ọdụ ụgbọ elu. Ndị a bịara ọhụrụ na mbara igwe anyị ka na-amalite amalite, COPA ga-enyekwa aka mepee nnukwu ọrụ nke teknụzụ a na-efe efe.